“အတွေးစလေးတွေ”: August 2010
Posted by Han Kyi at 2:23:00 pm No comments:
ဘလော့ဂ်တစ်ခုသွားလည်ရင်းနဲ့ နာဇီတွေရဲ့ ဆိုးရွားရက်စက်မှုတွေအကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်မိတယ်။
နာဇီဂျာမန်တွေဟာ တကယ်ပဲ ရက်စက်လွန်းပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ “မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ”ပါ။ ဂျာမန်လူမျိုးများသည် အခြားလူမျိုးများထက် သာလွန်မြင့်မြတ်သည်ဆိုတဲ့ အယူအဆကြီးက ဆိုးလွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာသားလှလှနဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေးရရင်တော့ မျိုးချစ်စိတ်လို့ခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဟစ်တလာဆိုတာ ဂျာမန်တွေရဲ့ရင်ထဲက အမျိုးသားသူရဲကောင်း ဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ဟစ်တလာဟာ လွန်ကဲလွန်းတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို ချွန်းအုပ်ပြီး သူတပါးတိုင်းပြည်တွေကို နယ်ချဲ့တာ၊ ဂျူးတွေကို မျိုးဖြုတ်တာမျိုးတွေသာ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သူ့ကိုဒီလောက်ထိ ရာဇ၀တ်ကောင်စာရင်း သွင်းခံရမယ်မထင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူလုပ်ခဲ့တာတွေထဲမှာ ကောင်းတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပြောစရာရှိတာက မကောင်းတာတွေများလွန်းတဲ့အခါကျတော့
ကဲ...ဟစ်တလာ ဘာတွေများ ကောင်းခဲ့သလဲ...
တိုင်းပြည်အတွက် သူလုပ်ပေးခဲ့တာတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဒါတွေကို အကုန်ပြောပြန်ရင် စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ဘက်က ရှေ့နေလိုက်တယ်လို့ ပြောခံရမှာကို ဗမာပီပီကြောက်တာမို့ အကြိုက်ဆုံးလေးတွေကိုပဲ ရွေးနုတ်တင်ပြတော့မယ်။
ဟစ်တလာဟာ ဂျာမန်လူမျိုးတွေကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုပြောစရာလိုတာက ဟစ်တလာဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုတော့ ဘာတစ်ခုမှ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်မပေးခဲ့တာပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်လူပျိုကြီးဖြစ်နေလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့လိင်စိတ်မူမမှန်အနေအထားကြောင့်လားတော့ မသိပါ။ သူပြောတဲ့စကားကတော့ ဂန္ထ၀င်ပါပဲ။
“ဂျာမန်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ယောက်ျားပီသတဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ယောက်ျားကောင်းတွေ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်” တဲ့။
သူလုပ်တဲ့အထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ “လုပ်အားပေးစခန်း”တွေပါ။ အဲဒီစခန်းတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အများအပြား အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။ အဲဒီစခန်းတွေကို အသက်၁၈နှစ်ပြည့်တဲ့ ယောက်ျားလေးတိုင်း ၆လသွားရပါတယ်။ အဲဒီစခန်းတွေကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်အလွှာကပေါက်ဖွားတဲ့ ယောက်ျားလေးမဆို တူညီဝတ်စုံဝတ်ပြီး တပြေးညီစည်းကမ်းအောက်မှာ နေရထိုင်ရပါတယ်။
လုပ်အားပေးစခန်းတွေမှာ မနက်၅နာရီခွဲတာနဲ့ အားလုံးအိပ်ရာထရပါတယ်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက စခန်းတိုင်းမှာ တစ်ချိန်တည်း ထရတာပါ။ ၆နာရီထိုးတာနဲ့ တန်းစီရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ မပြောတော့ပါ။ မနက်သတ်မှတ်ချိန်ရောက်တာနဲ့ စခန်းတိုင်းက လူငယ်အားလုံး လမ်းဖောက်တာ၊ မြေရိုင်းတွေဖော်တာစတဲ့ အလုပ်ကြမ်းတွေကို လုပ်ရပါတော့တယ်။ ဘယ်သူမှ အခွင့်ထူးခံလူတန်းစား မရှိပါ။ အားလုံးတပြေးညီလုပ်ရတာပါပဲ။ နေ့လည်ပိုင်း အနားယူပြီးတာနဲ့ ညနေပိုင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းငယ်တွေရှိပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေရှိပြီးတော့ သတ်မှတ်ချိန်မှာ အိပ်ရပါတယ်။ စခန်းသွင်းကာလ ၆လလုံး ဒီပုံစံအတိုင်းလည်ပတ်ပါတယ်။
(၁) လူငယ်အားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာတယ်
၆လလောက် အလုပ်ကြမ်းလုပ်ပြီးတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဆိုတာ မကြံ့ခိုင်ဘဲနေရိုးလား။ ကျားကျားလျားလျားနဲ့ တကယ့်ယောက်ျားကောင်းကြီးတွေ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။
(၂) လူငယ်အားလုံး တစ်စိတ်တည်း၊ တစ်ဝမ်းတည်း ဖြစ်လာတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ၆လလုံးလုံး တစ်မိုးတည်းအောက်မှာ လက်ရည်တစ်ပြင်တည်း လုပ်နေကြရတဲ့ လူငယ်တွေဟာ သာတယ်နာတယ်ဆိုတာတွေ၊ ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတွေ ကွာခြားမှုမရှိတော့ပဲ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်းဖြစ်လာပါတယ်။ အလုပ်စခန်းသဘာဝအရ ငွေကြေး၊ ရာထူးထက် အပင်ပန်းခံနိုင်မှုက ပိုအရေးပါတာမို့ ဆင်းရဲသားသားသမီးတွေဟာလည်း အဲဒီစခန်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထူထောင်ခွင့်ရကြပါတယ်။
အထူးပြောစရာမလိုပါ။ အလုပ်စခန်းဆိုပေမယ့် စစ်စခန်းလိုပဲ ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စည်းကမ်းသေ၀ပ်မှုပိုင်းမှာ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းသွားပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ပညာတတ်၊ ပိုက်ဆံရှိသားသမီးများဟာ အလုပ်ကြမ်းဆိုရင် သူတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ သဘောထားတတ်ပါတယ်။ ဒီစခန်းတွေမှာကျကျနန ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အလုပ်တိုင်းကို လုပ်ရဲလာပါတယ်။
ဟစ်တလာက ခေါင်းဆောင်ကောင်းမွေးတဲ့ အလုပ်ကို အထူးတလည် အရေးပေးပါတယ်။ ဒီစခန်းတွေမှာ လူငယ်တွေကို ကျကျနနလေ့လာပြီး ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး တကယ့်ကိုစံနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။ စခန်းမှာလဲ လက်တွေ့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်သားတွေထဲမှာ ဂျာမန်စစ်သားတွေဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းစွမ်းရည် ပြည့်ဝမှုအကောင်းဆုံး ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီစခန်းတွေရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဂျာမန်တွေအတွက် စစ်သားတွေမွေးထုတ်ပေးတာပါပဲ။ ပြောရရင်တော့ နယ်ချဲ့ဖို့ဆိုပါစို့။ ရည်ရွယ်ချက်ကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ဟစ်တလာအတွက်မမှားဘဲ စစ်မျက်နှာသာ နှစ်ဖက်မဖွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တကယ့်စစ်သားကောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဂျာမန်စစ်တပ်ကြီးကို ဥရောပနိုင်ငံတွေ အရှုံးပေးပြီး ကမ္ဘာ့မြေပုံပါ တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်က ချာတိတ်လေးတွေကို အားမရတိုင်း ဒီစခန်းတွေကို ပြေးပြေးမြင်တာပါပဲ။ ဒီခေတ်ချာတိတ်လေးတွေကြည့်ရတာ ဖင်ရှူးလေးတွေ၊ ဖလံလေးတွေ ဖြစ်နေပြီး ကျားကျားလျားလျားမရှိ အလှကြိုက်နေကြလွန်းတာ မြင်ရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါ။ တကယ်လို့များ လိုအပ်လာလို့ စစ်တိုက်ကြရရင်တောင် လက်ပစ်ဗုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီးပစ်ရမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဒီချာတိတ်တွေသာ ဟစ်တလာလက်အောက် ပို့လိုက်ရရင်တော့လေ...
Posted by Han Kyi at 5:06:00 am No comments:
အရှေ့ကျွန်း - ကုက္ကိုပင်
တောင်ကျွန်း - သပြေပင်
အနောက်ကျွန်း - ထိန်ပင်
မြောက်ကျွန်း - ပဒေသာပင်
တာဝတိံသာ - ပင်လယ်ကသစ်ပင်
အသူရာပြည် - သခွတ်ပင်
ဂဠုန်ပြည် - လက်ပံပင်
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၁) ၊ အပိုင်း(ခ) ထဲမှာ တွေ့လို့ ကောက်နုတ်ထားတာပါ။ ဗုဒ္ဓကျမ်းစာလာ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ အခုတလော စာကြွေးတွေ တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်နေလို့ ကောက်နုတ်ဝေငှစရာတွေ တော်တော်များနေပါတယ်။ ဖတ်ညွှန်းဆရာ ဖြစ်နေရင်လည်း ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဖတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိဖို့မှမဟုတ်ဘဲ၊
ဒါကြောင့် ဗဟုသုတဖြစ်စရာလေးတွေတွေ့ရင် ဖတ်ပြီးညွှန်းပါဦးမယ်...
Posted by Han Kyi at 8:04:00 pm No comments:
ကြားရကြားရ နားဝမသက်သာ . . .မြင်ရမြင်ရ ရင်ဝမသက်သာ . . .
ကိုမျိုး IR ; အဆိုတော်တစ်ယောက်မှာ Mood နဲ့ Expression ဘယ်ဟာ ပိုအရေးပါတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဘာကြောင့်များလဲ။ ကိုယ်ဆိုရတဲ့ သီချင်းရဲ့Theme နဲ့ Melody နဲ့ရော ဆိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ထူးအိမ်သင် ; Expression ဆိုတာ Mood ရှိမှ လာတာဗျ။ Mood ကောင်းမှ Expression ကောင်းနိုင်မှာ။ ဒီနှစ်ခုက တွဲနေတာကိုး။ ကောင်းဖို့ ရဖို့ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ဆိုမယ့် သီချင်းရဲ့ Melody နဲ့ Theme ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်သက်သက် ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ကို ဆိုနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုးရှိမှ ကောင်းနိုင်မယ်လို့ ထင်တာပဲ။
ကိုမျိုးIR ရဲ့အမေးကို ကိုထူးအိမ်သင် ဖြေထားတာပါ။
ထူးအိမ်သင်ဆိုတာ ဒီဘက်ခေတ် နောက်ပေါက်ချာတိတ်တွေအသာထားဦး သူနဲ့တန်းတူ အဆိုရှင်တွေထဲမှာတောင် ဂီတသီအိုရီပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် တန်းတူတဲ့သူ တော်တော်ရှားတဲ့ ပါရမီရှင်ပါ။ ပါရမီအပြင် လေ့လာလိုက်စားမှု၊ အာရုံဝင်စားမှု၊ ဂီတအပေါ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဖြူစင်မွန်မြတ်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း စတာတွေပါ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ တကယ့်ဂီတ ပညာရှင်ပါ။
အဲဒီဂီတပညာရှင် ကိုငှက်(ကိုထူးအိမ်သင်) ပြောထားတဲ့ စကားလေးကို သဘောကျလို့ စကားချီးနေတာပါ။ Mood ကောင်းမှ Expression ကောင်းမှာပါတဲ့။
မှန်လိုက်တာ။ ဒီစကားကို တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းမှာ Melody World မှာ ဆရာကြီးတစ်ဆူလုပ်နေတဲ့ ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း သိစေချင်လိုက်တာ။
ဒီဆောင်းပါးကို သူဖတ်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရမယ်။
ဖတ်ပြီးရင်လည်း ကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့ပါလို့လည်း ပြောရလ်ိမ့်ဦးမယ်။
တနင်္ဂနွေ ညနေတိုင်းမှာ အများသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း မြ၀တီရုပ်သံကနေ အဆိုရှင်သစ်လေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးနေတဲ့ Melody World အစီအစဉ်လွှင့်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်း ကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေလည်း ကြိုးစားကြပါတယ်။ အင်း...ဒါပေမယ့် ဂီတလောကအတွက် ကြိုးစားရတာထက် နွဲ့ယဉ်ဝင်းကြိုက်အောင် ကြိုးစားရတာပိုများပါတယ်။
ရေးနေရင်းမှပဲ သွားသတိရတယ်။ ဒီဘလော့ကို မြန်မာပြည်မှာ ဖတ်လို့မှမရတာ။ နွဲ့ယဉ်ဝင်းမဖတ်ဖြစ်တော့တာ သေချာသွားပြီ။ အဆဲမခံရတော့တာထက် သူမသိနိုင်တာတွေးမိရင် စိတ်တောင်မကောင်းဘူးလေ။
ရှိစေတော့ ရေးလက်စနဲ့ ဆက်ချလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်နော။
အထက်ကစကားကို ပြန်ဆက်ရရင် Melody World မှာ နွဲ့ယဉ်ဝင်းကြီးစိုးနေတာ တော်တော်တောင်ကြာနေပြီဆိုတော့ သူ့ခြေသူ့လက်တောင် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ လူ့စိတ်သဘာဝအရ နေရာတစ်ခုမှာကြာရှည်နေရပြီဆိုတာနဲ့ နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မာန်၊ မာနတွေ ၀င်လာရုံသာမက အလေးထားမှုလည်းပေါ့လာတတ်ပါတယ်။ နောက်...သူများအပေါ် လေးစားမှုလည်း ကျလာတတ်တာ သဘာဝပါ။
ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုရင် ဒီဘက်ပိုင်းမှာ နွဲ့ယဉ်ဝင်းလုပ်နေတာ တော်တော်လေးအချိုးမပြေဖြစ်လာတယ် ထင်ရလို့ပါ။ တစ်ခါက အဲဒီအစီအစဉ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်က မြန်မာသီချင်းလေးနဲ့ဝင်ပြိုင်ပါတယ်။ အဲဒါ ဆရာမကြီးက ဘာပြောလဲဆိုတော့ အဲဒီသီချင်းတွေနဲ့ မပြိုင်ရဘူးတဲ့။ ကောင်းပါလေ့။ အဲဒါတွေက သီချင်းမဟုတ်ဘူးလို့များ ဆရာမကြီးသတ်မှတ်လေရော့သလား။ ဂီတကိုမြတ်နိုးရင် ဘယ်ဂီတမဆို လက်ခံရမယ်ဆိုတာ လားလားမှ သိအံ့မထင်ပါ။
လာပြိုင်ရှာတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ပစ်ပစ်ခါခါဝေဖန်လိုက်တာ ကလေးတွေတော့မသိဘူး။ ကိုယ့်မှာကြားထဲကနေ သနားလိုက်တာ။ ကလေးတွေ ဘယ်လောက်ရှက်ရှာမလဲ။ တကယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးကြည့်နေတဲ့ အစီအစဉ်မှာ၊ အများရှေ့မှာ။ စေတနာကတော့ စေတနာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေကို အားပေးပြီးတွဲခေါ်ရမှာမဟုတ်လား။ တကယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်တောင်မှ ဂီတလောကမှာ ဒီလောက်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ခေတ်ကဆိုရင် ဟေမာနေ၀င်းနဲ့၊ မေဆွိနောက်မှာ တကယ့်အဝေးကြီးမှာပါ။ အခုကျတော့ သူကဆရာမကြီးလေနဲ့ အဆိုရှင်သစ်လေးတွေကို ဖဲ့လိုက်တာ ရစရာကို မရှိဘူး။ သူ့အတွက် ဒီအစီအစဉ်က မထူးဆန်းပေမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေအတွက်ကတော့ တော်တော်ကြီးကို အားခဲရတာပါ။ တစ်ချို့နယ်က လာပြိုင်တဲ့ကလေးတွေဆို ပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ်။ ကိုယ့်မြို့ကိုယ် ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးလေးတွေနဲ့ ပြန်ရရှာမလဲ။
တကယ်ဆိုရင် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသူဆိုတာ နာယကဂုဏ်၆ပါးနဲ့ ပြည့်စုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထကြွ၊ နုိုးကြား၊ သနား၊ သည်းခံ
ဒါမှပဲ နောက်လိုက်ပဲဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများမှာဖြစ်ပါတယ်။
နွဲ့ယဉ်ဝင်းက ကလေးတွေကို တစ်ခါတည်း Expression ဂါထာရွတ်ပြီး လှုပ်ခိုင်း၊ ရမ်းခိုင်းနေတာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ကြာလာတော့ ကလေးတွေမှာ အဆိုတော်နဲ့တောင်မတူတော့ဘဲ အအပြဇာတ်ကနေတာနဲ့ပဲ တူလာပါတော့တယ်။
သီချင်းအပေါ်မှာ အာရုံဝင်စားပြီး ခံစားချက်ရှိလာရင် သူ့ဟာသူ Expression ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ Expression ဆိုတာ မဆလာပါပဲ။ အဓိကက ဟင်းကောင်းဖို့ပါ။ မဆလာပါရင် ပိုကောင်းတာမှန်ပေမယ့် မဆလာချည်းထဲတော့ စားလို့မရနိုင်ပါ။ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဆိုတာကြောင့် အရေးကြီးတာက အဆိုပါပဲ။ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပါရင် ပိုကောင်းတာမှန်ပေမယ့် အဆိုထက် အလှုပ်ကိုဦးစားပေးနေတာ မြင်ရတော့ မဆလာချည်းပဲ စားနေရသလို ပူစပ်ပူလောင်ကြီး ဖြစ်ရပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပထမပိုင်းက အမြင်ကတ်မိပေမယ့် ကြာလာတော့လည်း သနားတာက ပိုလာပါရော။
နောက်စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုက ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးတွေ သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ သီချင်းရဲ့Trend ထက် သူတို့အသံကောင်းကြောင်းကိုပဲ အပြိုင်အဆိုင်ပြနေကြတာပါပဲ။ မလိုအပ်ဘဲ အသံတုန်ပစ်တာ၊ စည်းပေါက်တဲ့အထိ အသံရှည်ရှည်ဆွဲဆိုတာတွေများလွန်းပါတယ်။ တကယ်တော့ သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ နားဆင်သူပရိသတ် အတွက်ရည်စူးပြီးဆိုရတာမျိုးပါ။ အသံကောင်းတိုင်းစွတ်ဆွဲနေတော့ ပရိသတ်ကို စော်ကားသလိုဖြစ်နေပါရော။ အင်း...ဆရာမကြီးက ဒါမျိုးကျတော့ ပြောတော်မမူပါဘူးဗျား။
L ဆိုင်းဇီဆိုတဲ့ အဆိုတော်မလေးတစ်ယောက် အဆိုတော်မင်းဂေါင်ရဲ့ ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ်သီချင်းကို ပြန်ဆိုလိုက်တာ ရှိသမျှအသံကုန်ထုတ်ပြီး ဆွဲနိုင်သမျှဆွဲဆိုပစ်လိုက်တာ ကြားကတည်းက ရေစက်ကို ကုန်သွားပါရောလား။ မူရင်းအဆိုတော်ကို မလေးစားရာရောက်သလို ပရိသတ်ကိုလည်း ပိုက်ဆံယူပြီး နှိပ်စက်သလိုပါပဲ။ ကြားရကြားရ နားဝမချမ်းသာလွန်းလို့ သီချင်းဆိုရင် မူရင်းသီချင်းပဲ နားထောင်နေရတာကြာပါပေါ့။ မြန်မာလိုနားထောင်ချင်ရင်လည်း ကိုထီးတို့၊ ကိုတိုးတို့၊ ကိုငှက်တို့နဲ့ပဲ ငြိမ့်လိုက်တော့တယ်။
အင်း...မနေနိုင်တာကိုတော့ ရေးထုတ်လိုက်ပြီ။ နွဲ့ယဉ်ဝင်းပရိသတ်များ ဖတ်မိရင်လည်း မေတ္တာတော်အနန္တရမှာ သေချာသလောက်ပဲ။ ရှိပါစေတော့နော...
တစ်ခါတစ်ခါ ဒါမျိုးလေးတွေလည်း ပြောပေးဦးမှ...
Posted by Han Kyi at 1:21:00 am 1 comment:
ကောသလမင်းအိပ်မက် ၁၆ချက်ကို ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပေမယ့် တိတိကျကျမသိခဲ့ပါ။ ဘုရားသွားတဲ့အခါမှာ စောင်းတန်းတွေမှာ ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေမှာ အမြဲတွေ့ပေမယ့် သတိကောင်းကောင်းမမူမိတာကြောင့် အခုအရွယ်ထိ ခပ်ဝါးဝါးပဲ သိရုံပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကမှ ebook တစ်အုပ်ရလို့ ၁၆ချက်လုံး ကျကျနန သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်လိုယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေကြသူများအတွက် ပြန်ဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်။ အနက်ပါပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ နန်းရင်ပြင်တွင် နွားနက်ကြီးလေးကောင် ဝှေ့ရန်ဟန်ပြင်ပြီးမှ မဝှေ့တော့ဘဲ ရှောင်ထွက်သွားကြသည်
ကောင်းကင်တွင် မိုးတိမ်များမည်းနေသော်လည်း တကယ်တမ်းမရွာခြင်း
၂။ သစ်ပင်တို့သည် အရွယ်ငယ်ငယ်နှင့် ပွင့်ကြသီးကြသည်
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုကြပြီး သားသမီးတို့ မွေးဖွားကြခြင်း
၃။ မွေးကင်းစ နွားကလေး၏နို့ကို နွားမကြီးကစို့သည်
သားသမီးများကို မိဘတို့က မှီခိုနေထိုင်ကြရခြင်း
၄။ အားကောင်းမောင်းသန်နွားကြီးများကို မသုံးဘဲ နွားငယ်များကို ထမ်းပိုးတတ်ပြီး ၀န်ကိုရုန်းစေသည်
ပညာရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဘေးဖယ်၍ ငယ်ရွယ်သူများကိုသာ တာဝန်ကြီးများပေးအပ်ကြခြင်း
၅။ ခေါင်းနှစ်လုံးရှိသောမြင်းသည် ခေါင်းနှစ်လုံးစလုံးနှင့် အစာစားသည်
တရားစီရင်ရာတွင် တရားသူကြီးများက တရားလို၊ တရားခံနှစ်ဘက်စလုံးထံမှ လာဘ်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ကြခြင်း
၆။ တစ်သိန်းတန်သော ရွှေခွက်တွင် မြေခွေးအားကျင်ငယ်စွန့်စေရန် အလုအယက်တောင်းပန်ကြသည်
ငွေကြေးချမ်းသာသော လူယုတ်ထံတွင် မိမိတို့၏ အမျိုးကောင်းသမီးကို လက်ထပ်ပါရန် တောင်းပန်ကြခြင်း
၇။ ကျစ်နေဆဲဖြစ်သော ကြိုးအဖျားကို ကုတင်အောက်တွင် ၀ပ်နေသော မြေခွေးက ခိုးစားသည်
လင်ရှာဖွေထားသော ငွေကြေးများကို မယားဖြစ်သူက နောက်ကွယ်တွင် ဖောက်ပြန်သုံးစွဲခြင်း
၈။ လူများသည် ရေမရှိသော အိုးငယ်များဝိုင်းနေသည့် ရေပြည့်အိုးကြီးကို ၀ိုင်း၍ရေဖြည့်နေကြသည်
ဆင်းရဲသောတိုင်းသူပြည်သားများက ချမ်းသာသောဘုရင်ကို အခွန်များဆက်သကြရခြင်း
၉။ ရေစပ်ကြည်ပြီး ရေလည်တွင်နောက်နေသော ရေအိုင်တွင် သတ္တ၀ါများ ရေသောက်နေကြသည်
လူတို့သည် အခွန်အခကြီးမြင့်သော မြို့တွင်မနေနိုင်တော့ဘဲ တောသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြရခြင်း
၁၀။ ထမင်းတစ်အ်ိုးတည်းမှ အပျော့၊ အမာ၊ ပုံမှန်ထမင်း သုံးမျုိးရသည်
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး တိုင်းပြည်တစ်ခုထဲတွင်ပင် ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ရခြင်း
၁၁။ တစ်သိန်းတန် ကျောက်မျက်တို့ကို ပုန်းရည်၊ ရက်တက်ရည်နှင့် လဲ၍စားကြသည်
ဘုရားဟော တရားတော်ကို ငွေကြေးယူ၍ ဟောပြောကြခြင်း
၁၂။ ရေဗူးများသည် ရေအောက်သို့ မြုပ်ကြသည်
၁၃။ မြွေကို ဖားက ကိုက်စားသည်
အသက်ကြီးသူများက ငယ်ရွယ်သောမယားကိုယူထားကြခြင်းကြောင့် မယား၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ခံရခြင်း
၁၄။ ကျောက်ဖျာသည် ရေပေါ်တွင် ပေါ်နေသည်
ပညာမဲ့ လူယုတ်မာတို့သာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြခြင်း
၁၅။ ကျီးယုတ်ကို ဟင်္သာများက ၀ိုင်းရံခစားနေကြသည်
ပညာမဲ့လူယုတ်မာကို ပညာရှိသူတော်ကောင်းများက ၀ိုင်းဝန်းခစားကြရခြင်း
၁၆။ ကျား၊ ခြင်္သေ့တို့ကို ဆိတ်များက လိုက်လံကိုက်စားကြသည်
လူယုတ်မာများက မင်းနှင့်ပေါင်း၍ သူတော်ကောင်းများကို နှိပ်စက်ကြခြင်း
ကောသလမင်းအိပ်မက် ၁၆ချက်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က ပသေနဒီကောသလမင်းကြီး မက်တော်မူခဲ့တာပါ။ တစ်ညတည်းမှာ အဲဒီအိပ်မက် ၁၆ခုလုံးမက်တော့ မင်းကြီးကကြောက်ပြီး ပညာရှိအမတ်တွေကိုမေးပါသတဲ့။ အဲဒီမှာ ပညာရှိတွေကလည်း မင်းကြီးအသက်စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပြီး သတ္တ၀ါ စုံတွဲတွေဖမ်းပြီး ယာဇ်ပူဇော်မယ်ပြင်ပါရော။ ဒါပေမယ့် မင်းကြီးက ဘုရားရှင်ကို သွားပြီးမေးတော့မှပဲ အမှန်အတိုင်းသိပြီး သတ္တ၀ါတွေ ဘေးလွတ်ရပါသတဲ့။ ကြောက်စရာပညာရှိတွေပါပဲ...
Posted by Han Kyi at 5:35:00 pm No comments:
“အကယ်၍ ငါသည် . . .
ပညာတစ်ရွေးသားမျှသာ တတ်မြောက်သည်ဖြစ်အံ့ . . .
ထိုတစ်ရွေးသားမျှသော ပညာသည် . . .
ငါ့နိုင်ငံ၊ ငါ့လူမျိုးအတွက်သာမက . . .
Posted by Han Kyi at 5:07:00 am No comments:
ပညာရေးနယ်ပယ်ထဲကို ကိုယ်ရောက်နေခဲ့တာ ဒီနှစ်ဆိုရင် ခုနစ်နှစ်မြောက်ပါပြီ။
ဆရာမျိုးစုံ၊ ကျောင်းသားမျိုးစုံလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရှင်ကြီးဝမ်းရော၊ ရှင်ငယ်ဝမ်းပါ စုံအောင်ဝင်ခဲ့ဖူးတယ်များ ပြောရမလားမသိပါ။
လုပ်သက်ကြာလို့ ၀ါရင့်လာတာနဲ့အမျှ အခြေအနေတွေကို ကိုယ်တွယ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်း တိုးတက်လာပါပြီ။ နုစဉ်အခါကတော့ အခက်အခဲတစ်ခုခုများကြုံရင် ခေါင်းတွေပူပြီး၊ ပျာယာခတ်နေအောင် အဖြေရှာရပါတယ်။ ဒီဘက်ကာလပိုင်းမှာတော့ ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရာမှာ သူ့အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ပညာသိထက်၊ အာရုံသိ ပိုအားကောင်းလာတယ်လို့ပဲ ဆိုရတော့မလိုပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ ရင့်ကျက်လာတယ်ပြောပြော ကိုယ့်အားနည်းချက်တစ်ခုက အားနည်းတဲ့လူတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်တာတွေ့ရင် ဘယ်လိုမှစိတ်မထိမ်းနိုင်အောင် စိတ်တိုတတ်တာပါပဲ။ ဒေါသထွက်ရင် ကိုယ်ပဲအသက်တိုမှန်းသိပေမယ့် မထွက်ဘဲနေလို့မရတာ တကယ်ကိုဆိုးပါတယ်။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးထဲမှာ ခက်ပါတယ်လို့ပြောကြတဲ့ မုဒိတာတရားကို ပွားနိုင်ပေမယ့် ဥပေက္ခာတရားကို ပွားလို့ကိုမရနိုင်တာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ထဲက အဆိုးဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ပါ။
ဥပေက္ခာတရားကို ပွားဖို့ခက်နေရတဲ့ကြားထဲမှာ ကိုယ်ကျင်လည်နေရတဲ့ ပညာရေးလောကဆိုတာကလည်း အမြင်မတော်တာတွေ ဒုနဲ့ဒေးဆိုတော့ ဒေါသမထွက်ရတဲ့ရက် မရှိသလောက်တောင် ရှားနေပါတော့တယ်။ ကိုယ့်စိတ်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အပြစ်လုပ်ရင်၊ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုရှိရင် စိတ်ရှည်၊ သည်းခံနိုင်သလောက် လူကြီးတွေ၊ ဆရာတွေ နည်းလမ်းမကျရင် ဘယ်လိုမှကို သည်းခံလို့မရပါ။ ပညာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေဘက်က အားနည်းချက်တွေများတွေ့မိရင် အသားတွေပါတုန်အောင် စိတ်တိုတတ်ပါတယ်။
အခုလည်း တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မကြားဖူးတာကြားရတာကြောင့် ဒေါသအတောင့်လိုက်ထွက်ရပြန်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ စာသင်တဲ့ဆရာက သူ့အိမ်မှာ ကျူရှင်လာတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် water cooler ၀ယ်ဖို့ဆိုပြီး ကျောင်းသားတွေဆီက ပိုက်ဆံတောင်းပါသတဲ့။ တောင်းတာမှ နှစ်ခါတောင်တောင်းတယ်ဆိုပဲ။ ပြီးတော့ ၀ယ်လဲမ၀ယ်ပါဘူးတဲ့။ ၀ယ်ဖြစ်တယ်ထားပါဦး ကိုယ့်အိမ်အတွက်ပစ္စည်းကိုတော့ ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ် ၀ယ်သင့်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ခေါင်းစဉ်လှလှလေးတပ်ပြီး ကျောင်းသားတွေပေါ်က လူလည်ကျတာတော့ စိတ်ဓာတ်ယုတ်ညံ့လွန်းပါတယ်။ ပြန်ပြောခွင့် မရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဆီက ညစ်ညာပြီးတောင်းတာကတော့ အောက်တန်းကျလွန်းတာကို တွေးမိတိုင်း ဒေါသတွေအတောင့်လိုက် ထွက်ရပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဆီမှာစာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ လကုန်ရင် မီတာခလည်း ပေးကြရပါသတဲ့။ ကျောင်းသားတွေဆီက ငွေကို တကယ့်သပိတ်ဝင်၊ အိတ်ဝင်ကြံချက်ကတော့ ပက်စက်လွန်းလိုက်တာ။
အထက်ကပြောခဲ့တာကို အံ့သြတယ်ဆိုရင် ဒါအကင်းပဲရှိသေးတယ်လို့များ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ကျုရှင်တစ်ခုမှာ ကျောင်းသားတွေသင်တန်းကြေးသွင်းတာ နောက်ကျရင် လမ်းမထွက်ပြီး ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပါသတဲ့။ ရက်တော်တော်လေးလွန်အောင် လစာမသွင်းနိုင်သေးရင်တော့ အဲဒီကျောင်းသားကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မိဘနံမည်နဲ့တကွ သင်တန်းကြေးမသွင်းသေးတဲ့အကြောင်းကို လူမြင်ကွင်းမှာ ကပ်ထားပါသတဲ့ဗျား။ ဘယ်လောက်များ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ပညာဈေးသည်များပါလိမ့်။ တွေးရင်းတွေးရင်း ကျည်ပွေ့နဲ့ ကန်တော့ချင်စိတ်ပါ တဖွားဖွားပေါ်လာအောင် ကြည်ညိုမိပါရဲ့။
အဲဒီချစ်စရာကောင်းလှပါသော ကျူရှင်ဆရာက သူ့ကျောင်းသားတွေထဲက ပြောလို့၊ဆိုလို့မရတဲ့ ကျောင်းသားဆိုရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ရုပ်ဖျက်၊ အောက်မှာစာတန်းထိုးပြီး ကပ်လေ့ရှိပါသတဲ့။ ကျောင်းသားဖြစ်သူရှက်ပြီး နောက်မလုပ်ရဲအောင်ပါတဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆုံးမနည်း။ ကျောင်းသားဖြစ်သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာကို တစ်စက်ကလေးမှ ထည့်မစဉ်းစားတာ ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရပါ။ ကျောင်းသားကို လူစာရင်းမှ သွင်းရဲ့လားလို့ပဲ မေးရတော့မလိုပါပဲ။
လေးစားစရာကောင်းလှတဲ့ အဲဒီဆရာရဲ့ ကောင်းသတင်းလေးတွေက မကုန်သေးပါ။ မြို့မှာ စတိတ်ရှိုးတွေ၊ ဇာတ်ပွဲတွေရုံသွင်းရင် ကျောင်းသားတွေအတွက် လက်မှတ်တုတွေလုပ်ပေးပါသတဲ့။ ဘယ်လောက်များ ကိုယ်ချင်းစာတရား ခေါင်းပါးလိုက်တဲ့လူပါလိမ့်။ လက်မှတ်တစ်စောင်ကို လေး၊ ငါးထောင်ဆိုရင် အစောင်၂၀ဆိုရင်ပဲ ကန်ထရိုက်ခမျာ ငွေတစ်သိန်းနီးပါးလောက် နာရှာပါရော။ ကိုယ်ဆရာကြီးလုပ်ချင်တာနဲ့ သူများစီးပွားရေးပျက်စီးရတာကို နည်းနည်းလေးမှတောင် စဉ်းစားမိရဲ့လားမသိပါ။
တကယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စဟာ ဘာပဲပြောပြော ခိုးမှုပါပဲ။
ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် ဆုံးမရမယ့်အစား ခိုးမှုကျူးလွန်အောင်တောင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေတာ ဘာကြောင့်များ မရှက်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့တောင်မရပါ။ ကျောင်းသားဆိုတာမျိုးကတော့ ကိုယ့်ဆရာလုပ်ရင် ဘာမဆို အထင်ကြီးပြီးသားမို့ ဆရာလုပ်တာကို အဟုတ်ကြီးထင်သွားရင် ကလေးတွေနောင်ရေး ရင်လေးစရာကြီးပါ။ သင့်ရာအပ်ပို့ ဆရာတို့ဆိုတဲ့စကားက ကျောင်းသားတွေကို ငရဲပို့ရမယ်လို့များ တွေးမိတဲ့ဆရာထင်ပါရဲ့လေ။ ကိုယ့်မှာတော့ ကြားထဲကနေရှက်လို့မဆုံးတော့ပါ။ စိတ်လည်း မတိုချင်တော့ပါ။ ဆရာရော ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာက ပိုသွားပါတော့တယ်။
တစ်ရက်တစ်ရက်လည်း မမြင်သင့်တာတွေ၊ မကြားသင့်တာတွေ မကြာမကြာကြားနေရတာများပေမယ့် ဘယ်လိုမှလည်း အရေမထူနိုင်ပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးကိုတိုးတက်မြင့်မားအောင်လုပ်ဖို့ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိကြတာမို့ ကျောင်းဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျူရှင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်းမကျတာတွေမြင်နေသမျှ ဒေါသထွက်၊ စိတ်တိုဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။
စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့ကြားကပဲ ဆရာဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာကိုပြဖို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကြိုးစားနေဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကအထင်သေးကြတဲ့ ပညာရေးလောကသားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အစွမ်းရှိသရွေ့ အားထုတ်နေဦးမှာပါ။ နှမ်းတစ်လုံးထဲနဲ့ ဆီမဖြစ်ချင်နေပါစေ။ တာဝန်ကျေဖို့ အရေးကြီးတာမို့ အများကြီးမလုပ်နိုင်သေးရင်တောင် ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးသော စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေရမယ်လေ။
ကိုယ်က ကျောင်းသားတွေရဲ့ လမ်းပြကြယ် မဟုတ်လား...
Posted by Han Kyi at 9:16:00 pm No comments:
Posted by Han Kyi at 9:37:00 pm No comments:
အသက်ရှင်သန်နေသမျှ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းသတိတရနဲ့ လွမ်းနေဖြစ်မှာ တက္ကသိုယ်ကျောင်းသားဘ၀ပဲဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့။ အပူအပင် တစ်စက်ကလေးမှမရှိတဲ့ ပီဘိလူငယ်ဘ၀၊ ဘာရောင်တွေမှ မစွန်းထင်သေးတဲ့ အရွယ်၊ ဘ၀ရဲ့ အတောက်ပဆုံးနေ့ရက်တွေကို ဘယ်လိုမှမမေ့နိုင်တာကို အပြစ်တစ်ခုလို့ထင်ရင်လည်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးခံဖို့ အသင့်ပါပဲလေ။
အပေါင်းအသင်းနည်းခဲ့တဲ့ ကိုယ်တောင်မှ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိတရရှိနေသေးရင် အပေါင်းအသင်းနဲ့ သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနေခဲ့တဲ့ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ကျောင်းသားဘ၀ကို ဘယ်လောက်များ သတိရနေကြမလဲ။ အင်း မြစ်တစ်ခုမှာ ရေနှစ်ခါမချိုးနိုင်တာ သိပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တစ်ရက်လောက်တော့ ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်ရချင်ပါသေးတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ကိုယ်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀က စာမေးပွဲတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရတာများပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို စာမေးခံရ၊ အဆဲအဆိုခံရနဲ့ဆိုတော့ သူများတွေအတွက်ကတော့ နည်းနည်းမှပျော်စရာကောင်း မယ်ထင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတာမျိုးကလည်း ဖြစ်သမျှဘ၀အခြေအနေမှာ ပျော်အောင်နေတတ်ကြတာချည်းပဲမို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်တာပါပဲ။
ဆေးကျောင်းသားတို့ထုံးစံ လူနာတွေရှေ့မှာ အိနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေရတာလည်း တကယ်ဆိုရင် မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ အားရပါးရရယ်ချင်ပေမယ့် မျက်နှာပိုးသတ်ပြီး ပြုံးရုံလောက်ပဲ ပြုံးဖြစ်အောင် ကျင့်ရတာလည်း သိပ်တော့မစားသာတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကြာတော့လည်း ကိုယ်တို့မှာ စက်ရုပ်သာသာဖြစ်လာပါရော။ ဒါပေမယ့်..
ကိုယ်တို့ကတော့ အဲဒီလိုအဖြစ်မခံပါ။ ဒါကြောင့် တရားဝင်ပေါခွင့်ရအောင် အမြဲလိုလို ကြံလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ မကြာမကြာ ပျော်ပွဲစားထွက်တာပါပဲ။
ဆေးရုံတစ်ရုံကနေ နောက်တစ်ရုံပြောင်းရရင်လည်း ၀ဒ်ပြောင်းပါတီလုပ်ပါတယ်။ ပွဲတော်ရက်တွေမှာလည်း ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတပ်ပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်တို့ကို မြင်ရတဲ့သူတွေကတော့ ဘုရားစူးဆေးကျောင်းသားတွေလို့ခေါ်ကြမှာ မလွဲပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပေါခွင့်ရသလောက်တော့ အားရပါးရပေါကြတာကိုး။
ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာ မနီးမဝေးမှာ မှုန်ဝါးဝါးနဲ့ မပီဝိုးတ၀ါးပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆုံဖြစ်တာကလွဲလို့ အပြင်မှာ မတွေ့နိုင်ကြတော့ပါ။ တကယ်လို့ ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြရင်တောင် အရင်တုန်းက ကျောင်းသားဘ၀လိုတော့ ပျော်စရာကောင်းတော့မှာ မဟုတ်တာ ကြိုသိနေပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အသက်အရွယ်ဆိုတာ ပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
Posted by Han Kyi at 5:50:00 am No comments:
Posted by Han Kyi at 9:48:00 pm No comments:
ဘာလာပေးပေး မရချင်ဘူး . . . ဘယ်သူနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး . . .
လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုမယ့် အလုပ်သာဆိုရင် အလုပ်အားလုံးကတော့ မွန်မြတ်တာချည်းပါပဲ။
ဘယ်အလုပ်ကရော တိုင်းပြည်အတွက် အထောက်အပံ့အပြုနိုင်ဆုံးလဲ...
သမ္မာအာဇီဝကျတဲ့ လုပ်ငန်းအားလုံးပါပဲ။ လမ်းဘေးမှာ ပလတ်စတစ်တို့ ရေသန့်ဗူးတို့လိုက်ကောက်တဲ့ ချာတိတ်လေးတွေလည်း တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ တင်စားချင်ရင် ဒုတိယသန့်ရှင်းရေး ဌာနက တာဝန်ခံလေးတွေပေါ့။
ဘယ်အလုပ်က တိုင်းပြည်ကို အကျိုးအပြုဆုံးလဲ...
ဒီမေးခွန်းကတော့ ဖြေရတာနည်းနည်းကြပ်ပါတယ်။ မေးခွန်းချင်းတူပေမယ့် အဖြေချင်းမတူနိုင်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးပါ။ ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ၊ ခေတ်ကာလ အပိုင်းအခြားအလိုက် အဖြေတွေကွဲပြားနိုင်ပါသေးတယ်။
တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်သေးတဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ သူတပါးကျူးကျော်စော်ကားတာကို ခံနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ တပ်မတော်ဟာ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အကျိုးအပြုဆုံးပါ။ ငြိမ်းချမ်းကာစ အနေအထားမျိုး၊ ပြန်လည်ထူထောင်နေဆဲကာလမျိုးမှာ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေက တိုင်းပြည်ကို အကျိုးအပြုဆုံးပါ။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုးတက်မှုရှိလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ နိုင်ငံရေးပညာရှင်၊ ဥပဒေပညာရှင်၊ သမိုင်းပညာရှင်တွေက အရေးပါပါတယ်။
လောလောဆယ် ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်အနေအထားက ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုတော့ ဘယ်သူတွေများ တိုင်းပြည်အတွက်အရေးအပါဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်..
သူများတွေ သဘောတူမတူတော့ ကိုယ်မသိပါ။ သိလည်းမသိချင်ပါ။ သိအောင်လည်း မကြိုးစားချင်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ်က ပညာခေတ်ကြီးပါ။ ကျောက်ခေတ်၊ ကြေးခေတ်၊ သံခေတ် စတဲ့ခေတ်ပေါင်းများစွာမှာပေါ့
ဒီတော့ ညာဏ်ကြီးအောင်လုပ်ပေးနိုင်သူတွေဟာ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ အရေးပါလာပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အင်အားတွေပါ။ နိုင်ငံတကာ အင်အားချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းညှိကြသူတွေပါ။ သူတို့တွေဟာ ဘယ်သူတွေပါလိမ့်။
ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်သူမှအထင်မကြီးတဲ့ ဆရာတွေ၊ ဆရာမတွေပါ။ သူတို့တွေကောင်းရင်ကောင်းသလောက် တိုင်းပြည်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့ကတိုင်းပြည်တိုင်းရဲ့ ရေသောက်မြစ်တွေလည်း ဖြစ်နေလို့ပါ။ ရေသောက်မြစ်အားကောင်းရင် ကောင်းသလို အပင်ရှင်သန်ကြီးထွားတဲ့ သာဓကလိုပဲ သူတို့တွေ စွမ်းရည်ပြည့်ဝရင် ပြည့်ဝသလို တိုင်းပြည်အင်အားပြည့်ဝမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။
အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာ ကိုယ်ရေးခဲ့သလို အဲဒီင်္ဆရာဆရာမတွေကို ဘယ်သူမှအလေးထားတန်ဖိုးထားကြခြင်း မရှိကြပါ။ အများစုက အိမ်သာလိုသဘောထားကြပါသေးရဲ့။ ဆိုလိုတာက လိုမှသတိရပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ မေ့ထားကြတာကို ပြောချင်တာပါ။
မညာတမ်းဝန်ခံရရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အစောပိုင်းကာလတွေက အဲဒီလိုခပ်ညံ့ညံ့လူစားထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ အရေးပါမှန်းသိပေမယ့် ထူးထွေပြီး လေးစားရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ရိုး အမှန်ပါ။ ကိုယ်တိုင်က အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ် တက်ခဲ့တာကြောင့် ရိုးရိုးဝိဇ္ဖာဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးဘွဲ့ကို အထင်မကြီင်္းတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုလည်း ဆယ်တန်းတုန်းက အမှတ်နည်းနည်းရခဲ့လို့ လုပ်စားစရာမရှိတာကြောင့် ပညာရေးဘက်ဝင်တဲ့သူတွေလို့ ခပ်တိမ်တိမ်တွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပညာရေးလောကထဲကို စ၀င်တော့တောင် ဒီအလုပ်ရဲ့မွန်မြတ်မှုကို အရသာမခံတတ်ခဲ့သေးပါ.။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငါးနှစ်ကျော်ခြောက်နှစ်နီးပါးလောက် ဒီလောကထဲမှာ ကျင်လည်ပြီးတဲ့ အခုအချိန်မျိုးမှာတော့ လောကမှာ အမွန်မြတ်ဆုံးနဲ့ အရေးအပါဆုံးအလုပ်ဆိုတာ ပညာရေးပါလားဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာပါတော့တယ်။
တကယ်ဆို ဆရာတွေ၊ ဆရာမတွေဆိုတာ အားလုံးရဲ့ ဘ၀သခင်တွေပါ။
သူတို့ချပေးခဲ့တဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ ကိုယ်တို့တွေ ရှင်သန်လူလားမြောက်ကြရတာပါ။
အခုနေအချိန်မျိုးမှာ တန်ခိုးရှင်တစ်ဦးဦးက ကိုယ့်ကို တိုင်းပြည်မှာမင်းကြိုက်တဲ့ရာထူးပေးမယ်လို့လာပြောရင်တောင် ကိုယ်ကတော့ ကျောင်းဆရာပဲဆက်လုပ်မယ်ဗျာလို့ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးပြောဖြစ်မှာ အသေချာကြီးသေချာနေပါရဲ့...
Posted by Han Kyi at 3:43:00 am 1 comment:
လူတွေဟာ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ဘာကြောင့်များအထင်မကြီးကြတာလဲ...
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဆရာ၊ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးလေးစားမှုအားနည်းလို့ပါ
ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို လေးစားတဲ့သူတော့များပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အထင်မကြီးတဲ့သူတွေလည်း များပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက လေးစားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်က အထင်မကြီးခြင်းပါပဲ။ ကြာတော့ဆရာ၊ ဆရာမတွေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုပိုင်းမှာ အားနည်းလာပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူခြင်းတို့ဟာ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတာဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မပျော်ရွှင်မှုတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
မပျော်ရင်ထွက်ပြီး တခြားအလုပ်လုပ်စားပေါ့လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ပြောသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို ၀န်ထမ်းချင်းပဲနားလည်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ အကြောက်ဆုံးက အလုပ်ကနေထွက်ရမှာကိုပါပဲ။ ၀န်ထမ်းလောကမှာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ကူညီဖြေရှင်းကြတဲ့ သဘာဝကြောင့် အပြင်လောကမှာ မစွန့်စားရဲတော့တာလဲပါပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်အပေါ်မှာ သံယောဇဉ်ဖြစ်နေတာလဲပါပါတယ်။ ဘယ်လောက် အပေါက်ဆိုးပြီး စေတနာမပါတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အလုပ်ကိုတော့ သူသံယောဇဉ်ရှိကြတာချည်းပါပဲ။ အပြင်လောကကို ကြောက်တာနဲ့ လက်ရှိလောကကို သံယောဇဉ်တွယ်တာ နှစ်ချက်နဲ့ပဲ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာ အပြင်ထွက်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းလာပါတော့တယ်။
ဆရာ၊ ဆရာမတွေရတဲ့လစာက အောက်တန်းစာရေးလစာနဲ့ ထူးမခြားနားဖြစ်နေပါတယ်။ တာဝန်ကြတော့ သူတို့ခမျာ မနိုင်ရင်ကာကြီးထမ်းကြရတာပါ။ အိမ်မှာစားဝတ်နေရေး မပြေလည်တာနဲ့အမျှ အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်နာသလိုလိုဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ င်္ဒီကြားထဲမှာ လူအများစုက တန်ဖိုးဆိုတာကို ၀င်ငွေနဲ့တိုင်းတာလေ့ရှိတတ်တာကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေခမျာ ထိုက်တန်တဲ့အတင်ကြီး အားကျမှုကို မခံကြရတဲ သောကကိုလည်း ရင်စည်းခံကြရပြန်ပါတယ်။ ကြာလာတော့ သူ့စိတ်နဲ့သူ ပဍိပက္ခဖြစ်ပြီး သင်ကြားရေးမှာ ထိခိုက်ပါတော့တယ်။
ဆရာဖြစ်သူက သူ့အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားမှုကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှ သူ့ကျောင်းသားတွေလည်း ပညာရေးကို လေးစားမှုနည်းလာပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပေးသူကိုယ်တိုင်က တန်ဖိုးထားပြီး အမြတ်တနိုးရှိတဲ့အရာကို ပေးမှ ယူသူကလည်း မြတ်မြတ်နိုးနိုးရှိမှာမို့ပါ။
ဒါကြောင့် ပညာရေးတိုးတက်လာအောင် ပညာရေးပဲ့ကိုင်ရှင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို သူတို့ဘ၀အတွက် အာမခံချက်အပြည့်ရှိနိုင်လောက်တဲ့ ၀င်ငွေမျိုးရှိသင့်ကြောင်း တွေးမိပါတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ ၀င်ငွေမျိုးဖန်တီးပေးတာတောင်မှ ဆရာ၊ဆရာမတွေဘက်က ကြိုးစားအားထုတ်မှုပိုင်းတက်မလာရင်တော့လည်း
ကျောင်းသားလေးတွေပဲ ကံဆိုးကြတယ်လို့ပဲ မှတ်ရမယ်ထင်ရဲ့...
Posted by Han Kyi at 7:54:00 pm 1 comment:
၁၅.၈.၂၀၁၀ ( တနင်္ဂနွေနေ့ )
ထူးအိမ်သင်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီကဗျာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတေးရေးဆရာတွေထဲမှာ အလင်္ကာကျော်စွာ ဆရာမြို့မငြိမ်း ပြီးရင် ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ် နောက်မှာတော့ ထူးအိမ်သင်ကို အလေးစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတတစ်ခုအတွက် ဘ၀ပါရင်းပြီး ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ ဂီတအနုပညာ
ရှင်တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကြွေလွင့်ကုန်ကြတဲ့နောက် နောက်ထပ်မဆုံးရှုံးချင်တော့ပါ။ မြန်မာ့အနုပညာစစ်စစ်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဂီတတွေ ရှင်သန်တိုးတက်ပါစေ...
အရာရာကိုသာတိုက်နေရရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ တိုက်ပွဲကျတော့မှာပဲ
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အမြဲရှင်သန်နေတဲ့ သူရဲကောင်းဆိုတာ ကြားမှမကြားဖူးခဲ့တာပဲ...
အိပ်မက်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်စီမံခွင့်မှ မရှိတာပဲ
ဘ၀ကိုတော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်စီမံခွင့်ရအောင် ကြိုးစားလို့ရနိုင်သေးတယ်လေ...
ဘ၀ကတော့ ကဗျာလောက်အမြဲ မလှနိုင်ပြန်ဘူးလေ...
ခရီးမှန်ရင် လာရာ၊ လားရာ ရှိရမှာပေါ့
အခုတော့ ဘ၀ဆိုတာ ဘယ်မှာစလို့ ဘယ်မှာဆုံးမယ် သိမှမသိနိုင်ပဲကိုး...
နှစ်၊ လ၊ ရာသီ
လဲနေသူတွေ ထူပါစို့ . . .။ ။
၁၄.၈.၂၀၁၀ ( စနေနေ့ )
၁၃.၈.၂၀၁၀ ( သောကြာနေ့ )
မနက်ပိုင်းက စာသင်ချိန်မှာ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို subject ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲလို့မေးမိတယ်။ အဖြေကရှင်းပါတယ်။
ရင်ထဲမှာ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျန်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုပါ မေးကြည့်တယ်။
အဖြေက ထူးမခြားနားပါပဲ။ “မပြောတတ်ဘူး” “သဘောမပေါက်ဘူး”
စကားလုံးကွာပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အတူတူပါ။ သူတို့လေးတွေ Grammar အခြေခံ ဘာတစ်ခုမှမရှိတာ သနားစရာပါ။ အခြေခံဘာမှမရှိဘဲ အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ယူနေကြတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်ပါ။
ဥပမာပေးရရင် လေးတိုင်စင်ထောင်ပြီး နှစ်ထပ်တိုက်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသလိုပါပဲ။
ဒါနဲ့ ကလေးတွေကများ အင်မတန်ကို ညံ့ဖျင်းလွန်းနေတာလားဆိုတာ သတိထားကြည့်တော့လည်း သူ့အတန်းနဲ့သူ ထိုက်သင့်တဲ့ဉာဏ်ရည်တွေ ရှိကြပါတယ်။ သင်ပေးရင်လည်း တတ်လွယ်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့တောင် ဘာကြောင့်များ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံ ညံ့ကြတာလဲဆိုတာ တီးခေါက်ကြည့်တော့ သူတို့ခမျာ အခြေခံအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါကို တစ်ခါမှ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မသင်ခဲ့ရတာ သွားတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်တို့ ဆရာတွေဘက်က လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ကြလို့ပါ။ ကိုယ့်အယူအဆကတော့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ထူးချွန်မှုရှိုခြင်း၊ မရှိခြင်းဆိုတာ ဆရာအပေါ်မှာ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းမူတည်ပါတယ်။
လောကမှာ ခွေးကလေးတွေကိုတောင် လက်ပေးသင်လို့ရနိုင်တာဖြစ်လို့ လူသားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သင်လို့မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ကျောင်းသားတွေကို subject ဆိုတာ ကတ္တားကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီး ကတ္တားဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲလို့ ထပ်မေးမိပါတယ်။ အဲဒီမှာ အရင်ကလိုပဲ ထူးမခြားနားအဖြေ ထပ်ရပြန်ပါရော။ ကိုယ့်မှာ စိတ်တိုဖို့တောင် သတိမရအောင် သနားမိပါတော့တယ်။ ကျောင်းသားလေးတွေဟာ မြန်မာသဒ္ဒါကိုပါ ကျေကျေလည်လည် မရှိတာ ထပ်တွေ့ရပြန်တာပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ်က မြန်မာစာ၊ မြန်မာသဒ္ဒါကို အလေးတယူမရှိတာ တကယ်ကိုဆိုးပါတယ်။ adjective ဆိုတာကို နာမ၀ိသေသန လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် နာမ၀ိသေသနဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ကျောင်းသားကို “နာမ၀ိသေသနဆိုတာ နာမ်ကို အထူးပြုကြောင်း” ထပ်ရှင်းရပါတယ်။ နာမ်ဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအတွက် “နာမ်ဆိုတာ သက်ရှိသက်မဲ့၊ ဒြပ်ရှိဒြပ်မဲ့တို့ရဲ့ အမည်ဟူသမျှကို ခေါ်ကြောင်း” မီးခိုးကြွက်လျှောက် ရှင်းရပါတော့တယ်။
တကယ်လို့သာ ကျောင်းသားလေးတွေကို သူ့အဆင့် သူ့အတန်းနဲ့ညီတဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာမျိုးတွေ ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးဆိုတာ ပျော်စရာကြီးဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ အခုတော့ အခြေခံပညာ အထက်တန်းရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်နေကြပေမယ့် အလယ်တန်းအဆင့်သာသာ အခြေခံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရာရာအခက်အခဲတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတဲ့နောက်တော့ သူတို့လေးတွေ ပညာသင်ရတာ ဘယ်မှာပျော်ရှာကြတော့မလဲ။
ကိုယ်ကတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကို ပျော်စေချင်ပါတယ်။ တက်တက်ကြွကြွ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပညာသင်ယူနေကြတာကို မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလောက် ကျက်သရေရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမရှိတော့ပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် အလားအလာကောင်းတွေကို မြင်ရတာမို့ ကြည်နူးဖို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် လောလောဆယ်မှာ ကျောင်းသားလေးတွေ ကြုံနေရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံအားနည်းတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ မြန်မာသဒ္ဒါကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် မိခင်ဘာသာစကားရော အင်္ဂလိပ်စာပါ တစ်ပြေးညီတိုးတက်လာမှာဖြစ်လို့ အနောက်တိုင်းကို အထင်ကြီးလွန်းပြီး (လုံးဝအထင်ကြီးစရာမလိုဘူးလို့ မဆိုလိုပါ) ကိုယ့်ရိုးရာ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားမှုမရှိတဲ့ ပညာတတ်တွေ နည်းလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဒီဘက်ခေတ်ကျောင်းသားလေးတွေဟာ ရူပဗေဒဘာသာရပ်မှာလည်း အားနည်းကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ မေးခွန်းသဘာဝကိုက သင်ခန်းစာအားလုံးကို စုံစုံလင်လင်မေးလေ့ရှိတဲ့ ဘာသာဖြစ်တာကလည်း ကျောင်းသားငပျင်းလေးတွေကို ဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့အောင် လုပ်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံက သဘာဝကျပါတယ်။ သဘာဝမကျတာက တစ်ပွဲတိုးလုပ်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေတနဲ့ ပညာပွဲစားဆရာတစ်ချို့ပါ။ ဒီဘာသာရပ်ကို အောင်စေချင်ရင်တော့ တတ်အောင်သင်ပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်...ဒီဘာသာရပ်ရဲ့ မေးခွန်းထုတ်ပုံက တွက်နည်းရဲ့လှည့်ကွက်တွေသာမက မေးခွန်းရဲ့လှည့်ကွက်တွေ အစုံအလင်ထည့်တတ်တာပါပဲ။ ဆရာအများစုက ရူပဗေဒ အားနည်းတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ဒီတစ်ဘာသာထဲကို ဖိပြီးလုပ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝ မှားပါတယ်။ မေးခွန်းလှည့်ကွက်တွေကို နားလည်နိုင်ဖို့ များများတွက်ခိုင်းတဲ့နည်းထက် အင်္ဂလိပ်စာကို နည်းနည်းအားစိုက်ပေးလိုက်ရင် ပိုလွယ်ပြီး ကျောင်းသားတွေ ပိုသက်သာသွားမှာပါ။
ခရီးတစ်ခုကို သွားဖို့လမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ရောက်တာချင်းတူပေမယ့် လမ်းတိုတိုကနေ သက်သက်သာသာရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် စွမ်းအင်နဲ့ အချိန်ကို မလိုအပ်ဘဲဖြုန်းတီးရာ မရောက်တော့ဘဲ ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေအတွက် ပညာရေးပန်းတိုင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရောက်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေအတွက် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ပညာရေးနည်းစံနစ်တွေကိုသုံးပြီး တိုးတက်တဲ့ပညာရေးလူ့ဘောင်သစ်ကို ထူထောင်နိုင်ကြပါစေ...
Posted by Han Kyi at 1:46:00 am No comments:
ပျော်လိုက်တာ . . .
၁၂.၈.၁၀ ( ကြာသပတေးနေ့ )
Posted by Han Kyi at 2:42:00 am No comments:
စောစောက အလုပ်ကိုလာရင်း လမ်းမှာဆေး/မန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့လမ်းမှာဆုံတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀က အတူတူကဗျာတွေရေးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်မထားဘဲ ဆုံသွားတော့ ကိုယ်လည်းသူ့ကို ရုတ်တရက် လှမ်းမခေါ်ဖြစ်ဘူးလေ။ ကိုယ်က ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဖြစ်နေပြီး သူကသူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာဆိုတော့ သူလည်းသတိမထားမိလိုက်ဘူးထင်ပါရဲ့။ သတိထားမိဦးတော့ ကျောင်းသားဘ၀ကနဲ့ ဘယ်လိုမှ ပုံမတူတော့တဲ့ ကိုယ့်ကိုသူမမှတ်မိဖို့များပါတယ်။ တကယ်ဆိုကိုယ်ကအရင်မှတ်မိတာဆိုတော့ ကိုယ်ကပဲစခေါ်သင့်မှန်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမှန်းသေသေချာချာသိပါရဲ့နဲ့ လှမ်းမခေါ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းအံ့အားသင့်တာလည်း ပါကောင်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်တို့ကျောင်းကကျောင်းပြီးတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာ တာဝန်ချပေးတာများလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူငယ်ချင်းကိုမှ ပြန်တွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်မထားခဲ့မိရိုး အမှန်ပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကတော့ တာဝန်နဲ့လား၊ အလည်အပတ်လားတော့ မသိပါ။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်ကတော့ သူ့ကို လှမ်းခေါ်ဖို့ နှုတ်ဆွံ့နေတာတော့ အမှန်ပါ။
ပြီးမှ စိတ်ပြောင်းသွားပြီး ပြန်လှည့်ရှာတော့ မတွေ့တော့ပါ။ ဘယ်ကြားကိုများ ၀င်သွားပါလိမ့်ဆိုပြီး လိုက်ရှာသေးပေမယ့် လုံးဝကိုရှာလို့မတွေ့တော့တာပါ။ အဲဒီတော့မှ စိတ်ထဲမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာ လွန်ပါရော။ ကိုယ်တို့ဘ၀တွေဆိုတာ ကျောင်းနေဘက်တွေ ပြန်ဆုံကြဖို့အရေး တော်တော်ဝေးပါတယ်။ တာဝန်ကိုယ်စီနဲ့ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ပြန့်ကြဲနေကြရတဲ့ ဘ၀တွေမဟုတ်လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းမျက်နှာ ပြန်မြင်ရတော့ အရင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဖူးတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ကို လွမ်းလိုက်တာလေ...
Posted by Han Kyi at 5:20:00 pm No comments:
Posted by Han Kyi at 4:52:00 am 1 comment:
လူ့ဘ၀ဆိုတာ တကယ်တော့ ခဏတာလေးပါ။ နေ့မြင်၊ညပျောက်ဆိုသလိုပဲ
သေတဲ့လူတွေသေ ကျန်တဲ့သူတွေကမမောနိုင်မပန်းနိုင် ခရီးတွေဆက်လို့ပေါ့။ ရင်ဂိုရဲ့သီချင်းခေါင်းစဉ်ကို ငှားပြီးပြောရရင်တော့ ဘ၀ရထားကြီးပေါ်က သံသရာခရီးသည်တွေပါပဲ။
ခရီးစဉ်အတိအကျမသိရတဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းမှာ ဘယ်ဘူတာမှာ ဘယ်သူတွေဆင်းလို့ ဘယ်သူတွေတက်လာကြမယ်ဆိုတာလည်း မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ဘ၀ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ ခန့်ခန့်ကြီးထိုင်လိုက်ခွင့်ရသူတွေ ရကြသလိုကြုံရာနေရာကနေ ဖြစ်သလိုတွယ်ကပ်လိုက်ပါကြရသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ နေရာထိုင်ခင်းတွေကွဲကြပေမယ့် ဘယ်နေရာမှ မမြဲတာတော့ အတူတူပါပဲ။ ထိုင်ခုံရသူရော၊ ခုံမဲ့လိုက်ရသူပါ တစ်ချိန်ချိန်ရောက်ရင်တော့ ဆင်းသွားရမှာပါ..
ဘ၀ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ အတူစီးကြသူချင်း ရင်းနှီးသူကရင်းနှီး၊ ချစ်ခင်သူတွေကချစ်ခင်၊ ရန်စောင်သူတွေရန်စောင်ကြ၊ ကကြိုးတွေစုံအောင် ကကြပေါ့။ အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီသူတွေ ရှိသလို၊ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်သူတွေလည်း ပါလေရဲ့။ နေရာထိုင်ခင်းပေါ်မူတည်လို့ မာနတက်သူတွေတက်၊ ဒေါသထွက်သူတွေထွက်၊ မောဟတက်သူတွေတက်၊ သောကပွက်သူတွေပွက်လို့ မဆုံးသေးတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုအပေါ်မှာ မသေချာတဲ့ အနာဂတ်ကို မေ့ထားလို့ မရေရာတဲ့လက်ရှိအနေအထားအပေါ်မှာ ခံစားချက်စုံ၊ အယူအဆအဖုံဖုံနဲ့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ရှုပ်ထွေးပွေလီနေပါရဲ့...
တကယ်တော့ အယူအဆတွေဘယ်လောက်ကွဲကွဲ၊ နေရာထိုင်ခင်းတွေ ဘယ်လောက်လွဲလွဲ တစ်ခရီးတည်းအတူသွားနေကြရသူချင်းအတူတူမို့ မကြည်ဖြူနိုင်ရင်တောင် ညီတူညီမျှ စ်ိတ်ထားကြရင်ဖြင့် လောကဘယ်လောက်လှလိုက်မလဲ။
Posted by Han Kyi at 3:30:00 am No comments:
ဘာသာရေးဆိုတာ လူသားတွေအတွက် အားအင်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် မှီခိုအားထားရာ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဘယ်ဘာသာရေးမဆို ဆုံးမချက်တွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ လူနဲ့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အင်မတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ ဘာသာရေးအဆုံးအမအောက်မှာ ရှင်သန်နေထိုင်သူတစ်ယောက်ဟာ လောကဓံကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပါ မြင့်မားခိုင်မာပါတယ်။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဘာသာရေးတိုင်းဟာ လူသားတွေအတွက် နောက်ဆုံးအားကိုးအားထားပြုရာပါပဲ။
လူ့သဘာဝအရ မမြင်ရတဲ့အရာ၊ မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အရာတွေကို ကြောက်စမြဲမို့ ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်တဲ့ တမလွန်ဘ၀ဆိုတာကြီးကိုတော့ ကြောက်ကြစမြဲပါ။ ဒါကြောင့် တမလွန်ဘ၀နဲ့ပတ်သက်ပြီး အားကိုးအားထားပြုစရာ တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးကို အလေးထားကြရတာ သဘာဝပါ။
ဘယ်ဘာသာမဆို တမလွန်ဘ၀ကိုတော့ အလေးတယူရှိလှတာ တွေ့ရပါတယ်။ အယူအဆချင်းကွဲကြပေမယ့် တမလွန်ကို အလေးအနက်ထားကြတာချင်းတော့ အတူတူပါ။
ကိုယ့်အယူအဆကတော့ ဘာသာရေးတိုင်းဟာ မွန်မြတ်ပါတယ်။ လေ့လာမိသလောက်တော့ လူတွေကို မကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ လမ်းပြတဲ့ ဘာသာဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ တချို့သော အစွန်းရောက်ဘာသာတွေကလွဲရင်ပေါ့။
ဒီလိုမွန်မြတ်အရေးပါလှတဲ့ ဘာသာရေးတွေကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းနေရတာဖြစ်လို့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်း အင်မတန်မှ တာဝန်ကြီးပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ဘာသာတရားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းသူတွေအပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ လောကဓမ္မတာအရ လူအများစုဟာ အရာရာတိုင်းနီးပါးကို အမြင်အပေါ်မူတည်ပြီး ပထမဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အထင်မှန်မမှန်ကို နောက်ပိုင်းမှာ သုံးသပ်သူကသုံးသပ်ပြီး အများစုကသုံးသပ်လေ့မရှိတာများပါတယ်။ သုံးသပ်လေ့ရှိသူထဲက တချို့တ၀က်ကလည်း သုံးသပ်ဖို့အခွင့်မသာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်အရာမဆို အရည်အသွေးနဲ့အနှစ်သာရတင်မက အမြင်တင့်တယ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ဘာသာရေးဟာ ဈေးကွက်တင်ရောင်းစရာ ပစ္စည်းမဟုတ်တာကြောင့် အမြင်တင့်တယ်စရာမလိုတာမှန်ပေမယ့်
အတွင်းမှာ အနှစ်ပြည့်ကြောင်း အပြင်ကနေသိနိုင်ရင် ပိုကောင်းမှာသေချာပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ကောင်းမကောင်းဆိုတာကို သောက်ကြည့်မှသိမှာပါ။ မသောက်ရင်တောင် မြည်းကြည့်ဖို့တော့လိုမှာ သေချာပါတယ်။ အမြင်နဲ့တင်ဆုံးဖြတ်လို့မရတာကို ပြောချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ထည့်တဲ့ခွက်က ညစ်ပေပြီး သောက်ချင်စရာတစ်ကွက်မှ မရှိရင်တော့ ကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကို ဘယ်သူမှ သောက်ကြမှာ မဟုတ်ပါ။
အထက်ကဥပမာလိုပဲ ဘာသာတရားဆိုတာ လက်ဖက်ရည်နဲ့တူပြီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက လက်ဖက်ရည်ခွက်တွေနဲ့ တူပါတယ်။ ခွက်နဲ့တူတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ပုံစံမကျရင် ဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ်၊ မွန်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားကိုမှ လူတွေအလေးထားမှာ မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ဖက်ရည်သိက္ခာမကျအောင်၊ တန်ဖိုးမလျော့ရလေအောင်
Posted by Han Kyi at 7:14:00 pm No comments: